४० वर्षीय बालकराम श्रेष्ठले छेडे जिब्रो
भक्तपुर, असोज १० । मध्यपुर थिमी नगरपालिका–५ चोडेका ४० वर्षीय बालकराम श्रेष्ठले जिब्रो छेड्नुभएको छ । उहाँले मङ्गलबार राति ८ बजे मध्यपुरथिमी नगरपालिका दिगु भैरव मन्दिरको मण्डपमा जिब्रो छेड्नुभएको हो ।
विसं २०६३ देखि रोकिएर गत वर्षदेखि शुरु भएकोे थिमीको जिब्रो छेड्ने जात्रालाई निरन्तरता दिन यस वर्ष उहाँले हजाराँै मानिसको अगाडि जिब्रो छेड्नु भएको हो । जिब्रो छेडाउने व्यक्ति मध्यपुर थिमीको श्रेष्ठ थरकै हुनुपर्ने चलन छ । ‘चेंया पुन्हिया मेय प्वा ः खनेगु’ जात्रा व्यवस्थापन समितिको संयोजनमा उहाँले जिब्रो छेड्नु भएको हो । जिब्रो छेड्नु अघि थिमी लाय्कुका नायो पमाहरु गई हनुमानढोका लाय्कु (दरबार)बाट राजाको चिनो (खड्ग) लिएर आएको केहीबेर पछि जिब्रो छेडिएको थियो ।
त्यस्तै जात्राको चार दिनअघिदेखि लगातार सम्पूर्ण परिकार बनाई नगरका मानिसलाई भोज खुवाइएको थियो । जिब्रो छेडाउन थिमीमै बनाएको माटोको पाला, सुपारी, जिउँदो माछासहित दिगु भैरव मन्दिरमा पूजा गरिएको थियो । जिब्रो छेड्ने जात्रा सञ्चालन गर्न करीब रु सात लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा नगरपालिकाले समेत आर्थिक सहयोग गरेको छ । यो जात्राका लागि गत वर्ष रु एक लाख सहयोग गरेको मध्यपुरथिमी नगरपालिकाले यस वर्ष भने रु तीन लाख ५० हजार सहयोग गरेको मध्यपुरथिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
आज चैत्र १५ गते शुक्रबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज चैत्र १४ गते बिहिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज चैत्र १३ गते बुधबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज चैत्र १२ गते मंगलबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज चैत्र ९ गते शनिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज चैत्र ८ गते शुक्रबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज चैत्र ७ गते विहिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
होलीमा अबान्छित गतिबिधि गर्ने एक महिला सहित ८४ पक्राउ, ५१५ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा
आज चैत्र ६ गते बुधबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज फागुन २९गते बुधबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज फागुन २८गते मंगलबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज फागुन २७गते सोमबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज फागुन २६गते आइतबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज फागुन २५गते शनिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज फागुन २४गते शुक्रबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज फागुन २३गते विहिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज फागुन २२ गते बुधबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज फागुन २१ गते मंगलबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज फागुन २० गते सोमबार (महाशिवरात्री पर्व)तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
पशुपती नाथमा नागाबाबाको लिला, नागाबाबा हेर्न युवा युवतीहरुको भिड (हेर्नुस ताजा तस्वीर)
आज फागुन १९ गते आइतबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज फागुन १८ गते शनिवार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल